के तपाईलाई थाहा छ पसल र गाडीमा कागती र खुर्सानीको माला किन झुन्डाइन्छ ? – Medianp
के तपाईलाई थाहा छ पसल र गाडीमा कागती र खुर्सानीको माला किन झुन्डाइन्छ ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक २०, २०७५१४:२८0
काठमाडौ । के तपाईले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ ? पसल, घरमा वा यात्राको क्रममा गाडीको अगाडि कागती र खुर्सानीको माला झुण्ड्याएर राखेको हुन्छ । तर तपाईले यसको कारण थाहा छैन होला ,तपाईले गाउँघरको अन्धविश्वासलाई नै अगाल्दै सोच्नुभयो होला ।
यसको अर्थ खराब मान्छेको आँखा नलागोस् भन्नका लागि यसरी कागती झुण्ड्याइएको हो भनेर लागीराको होला , तर यस्ता धेरै नेपाली समाजमा ब्याप्त अन्धविश्वासले पनि हामीलाई फाइदै गरिरहेको हुन्छ तर हामीले थाहा नपाएर मात्र यस्तो भएको हो । यसको मुख्य कारण चाहि कागती र खुर्सानीको यो संयोगले स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउने भएकाले हो ।
त्यसैगरी वास्तुदोष हटाउनका लागि कागती र खुर्सानी घरमा लगाउन प्रेरित गरिन्छ । तर यसको मुख्य ३ यस्ता फाइदाहरु रहेका छन् ।
– पहिलो फाइदा हो ,घरमा कागतीको रुख भयो भने वातावरण स्वच्छ र सकारात्मक ऊर्जायुक्त हुन्छ । सबैले घरमा रुख रोप्न नसक्ने भएकाले कागती र खुर्सानीको एक सेटले काम चलाउँछन् ।
– त्यसैगरी दोस्रोमा कागतीमा धागो उन्दा कागतीबाट सुगन्ध निस्कन्छ र वातावरणमा फैलिन्छ । यसले मूड पनि फ्रेश गराउँछ अनि कीरा पनि भगाउँछ । त्यसैले त्यो उनिएको कागती एक हप्ताभित्र बासी हुने भएकाले प्रत्येक हप्ता फेर्नुपर्दछ ।
– त्यसैगरी तेस्रोमा कागती र खुर्सानीले प्राकृतिक रूपमा वायुलाई स्वच्छ बनाउँछन् । त्यसैले तपाईले पनि एउटा कागती र सातवटा खुर्सानीलाई धागोमा उन्नुपर्छ । आफ्नो ढोकामा झुण्ड्याउनुस् र प्रत्येक हप्ता परिवर्तन गर्नुस् । यो स्वभाको लागी मात्र नभएर स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भएकाले यस्तो गरेको हो । यदि तपाई पनि यी फाइदाको उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस् ।
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो झुट ! पक्कै तपाईले पनि साँचो नै मान्नु भएको होला !